Jereo ny sasany amin'ireo taovolo mendri-piderana indrindra ho an'ny volo tsara | Bezzia
Susana Garcia | 02/05/2021 20:00 | beauty, Fandram-bolo
El tsara volo matetika manana olana maro ary ny iray amin'izy ireo dia ny tsy fananany be loatra. Rehefa mitranga izany, ny ezahinay dia ny hahatonga azy io ho be voluminous sy be dia be, miaraka amin'ny fiainana bebe kokoa. Izany no antony anaovan'ny taovolo sy fanapahana sasany izay afaka manampy anao hamorona io fomba io amin'ny volonao izay manadino anao fa tsara izany fa tsy volo be dia be. Misy taovolo vitsivitsy izay hanatsaranao ny fisehoan'ny volonao.
ny ny olona manana volo tsara dia tokony hikarakara tsara azy ary eritrereto ny fomba fanaingoana azy io mba hanomezana endrika be sy salama. Ankoatry ny fikarakarana vokatra dia marina fa ny bika aman'endriny dia miankina amin'ny fomba fanamboarantsika ny volontsika ihany koa satria afaka mamorona fomba hafa tanteraka isika.
1 Mane midi mifanaraka
2 Sahia amin'ny pixie
3 Tady volom-borona
4 Notapahin'i Bob tamin'ny onja
5 Fikolokoloana volo tsara
Mane midi mifanaraka
Na ny volo aza dia afaka manampy anao mamorona volom-borona tsara tarehy kokoa raha tsara ny volonao. Ity dia iray amin'ireo safidy mahazatra indrindra, satria raha voakapa mitovy ny volo dia hanana ny fahatsapana fa be dia be noho ny manapaka azy amin'ny sosona ianao, satria mampihena ny habetsany. ny Ny volo Midi dia tonta be ary karazana volo izay azo amboarina mora foana. Manome antsika fahaizana lehibe izy io satria afaka mampiasa kojakojam-bolo sy manao taovolo na mitafy azy malalaka. Izy io koa dia iray amin'ireo taovolo lamaody amin'izao fotoana izao, noho izany dia tsy tokony hatsahatrao ny fitafianao azy. Azonao atao ny manome azy feo na onja kely ary izany dia hiteraka endrika voluminous kokoa, manaloka volo tsara.
Sahia amin'ny pixie
Safidy tsara koa ny volo Pixie cut. Ny pixie dia ilay volo tena fohy fa toa tsara amin'ny ankamaroan'ny olona io, miaraka amin'ny karazana volo rehetra. Ny fanapahana pixie dia mora tazomina ary manampy antsika hanana endrika maoderina sy mamaky tany, na dia somary sahy ary tsy ny olon-drehetra no te-hitafy fohy ny volon'izy ireo. Tonga lafatra izy io raha manana volo mahitsy koa ianao satria tsy hikorontana.
Ny iray amin'ireo taovolo izay azontsika atao raha manana volo tsara sy lava isika dia ny famoronana iray amin'ireo taovolo izay misy fikorontanana iray satria manome azy ireo boky. Amin'ity tranga ity dia miresaka momba randrana isika. Raha ataontsika miboridana be dia be ny taovolo tsara tarehy, fa raha ny manakorontana kely isika dia ho hafa ny vokany. Mora kokoa ny mahita ny volon'ny volo raha toa ka somary sahirana ny randrana, noho izany dia vokany izay mahasoa an'io karazana volo io.
Notapahin'i Bob tamin'ny onja
El ny volo tsara dia tokony hotononina amin'ny onja, satria raha manitsy azy tanteraka isika dia hataontsika tsara kokoa. Ny bob cut dia navaozina indray ary anaovana fohy sy symmetrika. Ny fanampiana onja vitsivitsy amin'ity volo ity dia hevitra lehibe satria manome hetsika sy fomba fanao azy io.
Fikolokoloana volo tsara
Mikarakara sy manaingo volo tsara dia tsy maintsy raisintsika ho zavatra sasany. Ny iray amin'izy ireo dia tsara kokoa kosohy ny volo ary volavory borosy boribory izy ary maina tsarar, fa miaraka amin'ny fitaovana hanaovana onja amin'ny fomba tsotra ihany koa. Halaviro ireo mahitsy izay mahitsy tanteraka ny volonao, satria toa tsy dia be loatra izy io. Tsy maintsy karakaraina koa io volo io satria mora vaky, ka tsy maintsy kosehina tsara sy borosy voajanahary voajanahary. Raha fohy no anaovantsika azy dia lasa tsy dia misavoritaka izy, fa raha lava kosa dia tsy maintsy manandrana mamaha azy amin'ny faran'ny sisiny isika mba tsy hanorotoroana azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » beauty » Taovolo ho an'ny volo tsara
Fomba hafa hanaovana barbecue vegetarian